Amantii Oromoo (Waaqeffannaa) keessatti, Waaqayyoo namoota waliin kan walqunnamu karaa ayyaanaati. Dureewwan amantii akka bakka bu’oota Waaqaatti ilaalamu. Akka amantichaattis Waaqayyo ayyaanota (‘God Spirit’) kana lageen, tulluuwwaniifi mukeen guguddoo keessa kaa’eera. Kanaaf bakkeewwan ayyaanonni jiraatan lafa eebbifamoofi kabajamoo jedhamanii amanamu. Bakkeewwan eebbifamoon kunneen bakkatti namoonni amantii itti gaggeeffatan, wareeggataniifi Waaqa itti kadhataniidha.